Assolavoro: adeegyada shaqada iyo taageerida ee qaxootiga/iyo | JumaMap
AssoLavoro, , Ururka Qaranka ee Xafiisyadda Shaqada ka shaqeeya , wuxuu hormariyaa , iyada oo la kaashanaysa UNHCR, mashruuca ” Martigelinta & Shaqada” kaas oo bixiya adeegyada shaqada iyo taageero la taaban karo siiyana dad haysta sharciyadda qaxooti-nimadda ilaalinta caalamiga ah, ilaalinta ku meel gaarka ah iyo ilaalinta ka gaarka ah.
Adeegyada la bixiyo
Ururka wuxuu u fidiya Shaqaaluhu imanaya Talyaaniga Adeegyada is dhex galka bulshada iyo dammaanad-qaadka helista shaqado , adeegtada waa lacag la’aan , waxaa ka mid ah:
Hanuuninta iyo tababarka bilowga ah. Waa Lacag la’aan, kulanka macluumaadka laysku weydaarsanayo ugu horeya oo ujeedadiisu tahay kor u qaadista wacyiga suuqa shaqada ee Talyaaniga iyo Wakaalada Shaqaalaynta. Inta uu shirku socdo, waxaa lagu soo bandhigi doona khariidad ku saabsan adeegyada iyo adeegyada ay Hay’aduhu u qabtaan dadka imaanaya
Isku-dheelitirnaanta Xirfadaha. Isku-dheellitirka Xirfadaha (BdC) waa qalab aasaasi ah oo kuu oggolaanaya inaad ku ogaato xirfadaha oo aad falanqeyso sifooyinka shakhsi ahaaneed ee qofka si aad u awooddo inaad u jihayso waddada tababarka ugu habboon isaga (Koorsada aasaasiga ah ee luqadda iyo dhaqanka Talyaaniga ama koorso tababar xirfadeed) .
Koorasyada aasaasiga ah ee Talyaaniga. Inta lagu jiro koorsada, ardaydu waxay codsan karaan in loo soo celiyo kharashaadka cunnada iyo hoyga, waxayna xaq u leeyihiin gunno saacadii ah € 3.50 / saac. Dhamaadka koorsada tababarka, gunno hal mar ah oo ah € 1,000 ayaa la siin doona.
Koorsooyin tababar xirfadeed. Inta lagu jiro koorsada, ardaydu waxay codsan karaan in loo soo celiyo kharashaadka cunnada iyo hoyga, waxayna xaq u leeyihiin gunno saacadii ah € 3.50 / saac. Dhamaadka koorsada tababarka, gunno hal mar ah oo ah € 1,000 ayaa la sin doona (haddii aan hore loo bixin dhammaadka koorsada aasaasiga ah ee luqadda iyo dhaqanka Talyaaniga)
Xuquuqda kuwa ka qayb galaya koorsada
Ka faa’iidaystayaasha ilaalinta caalamiga ah, ilaalinta ku meel gaar ah iyo ilaalinta gaarka ah ee ka qaybqaata koorsada tababarka aasaasiga ah ama xirfada, ama ka shaqeeya Wakaalada Shaqaalaynta, waxay xaq u leeyihiin qaar ka mid ah tabarucyada muhiimka ah. Si faahfaahsan
Caawinaad dhaqaale ee xanaanada caruurta . Caawinaad dhaqaale ee xannaanada caruurta ayaa bishiiba la binayaa ugu badnaan €150 ilaa sannadka caruurta ay gaarayaan sanadka saddexaad iyo ilaa ka qaybgalka xanaanada ee soo dhamaato ee muddada looga tala galay.
Taageerada waxbarashada. Waa kuwan qaar ka mid ah tabarucaadka lagu taageerayo kharashaadka uu qofka ku bixiya waxbarashada:
Taakuleyn dhaqaalae ee soo iibsashada agabka waxbarashada iyo buugaagta caruurtooda (200 €)
Taakuleyn dhaqaale si loogu soo iisado buugaagta ama agabka kale ee wax waxbarashadda ee ardayda dhigata koorsooyinka fiidkii (200 €)
Ka qayb qaadashada kharashaadka ku baxay kharashka jaamacadda (200 €).
Taakuleyn dhaqaalae ee iibsashada buugaagta ama agabka kale waxbarasho ee ardayda fasalada 1aad iyo 3aad (200€ )
Dib u soo celinta lacag loogu soo iibshay waxyaabaha aasaasiga u ah dhallaanka. Ka qayb qaadashadda kharashaadka lagu galay iibka alaabta lagama maarmaanka u ah daryeelka ilmahaaga ilaa sanadka saddexaad jirsan doono, ugu badnaan € 800. Codsiga waxaa loo samayn karaa caruur kasta.
Dib u celinta lacag ee kaalmada cilmi nafsiga. Taakuleyn dhaqaale ee kharashaadka cilmi nafsadda ah ee nafsaddiisa ama xubnaha qoyska mid ka mid ah ugu badnaan € 200 macmiilkiiba.
Macluumaad intaas ka badan: Mashruuca “Soo Dhaweynta &Shaqda“
335 Visite totali, 6 visite odierne
377 Visite totali, 7 visite odierne
Waa maxay Fiisaha? Waa maxay Fiisaha?Fiisaha waa oggolaansho, oo ay bixisoQunsuliyadda ama Wakiil Diblomaasiyadeed ooawood u leh, kaas oo u oggolaanaya dadkaajnabiga ah inay soo